ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: သူငယ်ချင်း
ကမောင်မျိုးက အကောင်သေးပေမယ့် အမြီးရှည်တယ်လို့လုပ်လိုက်
ဘယ်လို သိသွားပါလိမ့်.....း)
အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းမလေးကို အရမ်း သတိရသွားတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ သံယောဇဉ်က ဘယ်အချိန်မဆို နွေးထွေး ချိုမြိန်နေတတ်တယ်နော်..။
အခုလက်ရှိ ဘော်လီ..အဲလေ...ဘော်ဒီကို ဒါ့ပုံရိုက်တင်ရင်လဲ..စက်ဆီ နှမ်းဆီ မဖြစ်တောင်....ကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတို့.....ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမြင်းဂျီးများ ရုံးတို့.....ဟင်နရီ ဒူးနန့်ရဲ့ သားသမီးများ ဂရု တို့ကနေပြီး နင့်အတွက် ရံပုံငွေ ရှာပေးနိုင်ပါတယ်ဟယ်.....
“ သူငယ်ချင်းဆိုတာ တွေ့တုန်းသာ ခင်ခင်မင်မင်ရှိကြပြီး နောင်ပြန်တွေ့တဲ့အခါ ပြုံးပြ နှုတ်ဆက်ရုံနဲ့ ခင်မင်မှုတွေက အဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ငါတို့ ခင်မင်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေက အလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့ အဲ့တာကို သူငယ်ချင်းလို့ မခေါ်ဘူး ”
Hote pa.Your post made me miss my old friends.How long we apart each others,it's just like yesterday when we meet again.Wish you be among your tha nge chins at least one beside you.
ဘဝမှာ ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးတွေ ရတာဟာလည်း ကံကောင်းခြင်း တမျိုးပါပဲ..၊ မြန်မာပြည်မှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းလို့ အားရပါးရ ခေါ်နိုင်မယ့် လူတွေကို ပြန်သတိရ နေမိတယ်...။
လည်း ပါတယ်ထင်ရဲ့...၊ငယ်တုန်းကတော့ ကိုယ့်မာန
လောကမမှာ တန်ဖိုးအထားသင့်ဆုံး အရာတွေထဲမှာ သူငယ်ချင်းဆိုတာလဲ ပါတယ်လို့ ထင်တယ်။ သူငယ်ချင်း မှန်ရင် တစ်ယောက် အနွံတာကို တစ်ယောက် ခံဖူးရမယ်။ တစ်ယောက် တစ်ပြန်အမြဲ ကူညီနေနိုင်ရမယ်။ လိုအပ်လာရင် ကူညီနိုင်ဖို့ အမြဲအဆင်သင့် ရှိနေရမယ်လို့ အစ်ကိုထင်တယ်။ အဲဒီလို နေနိုင်အောင်လဲ ကြိုးစားတယ် ညီရေ... မောင်မျုိးပြောသလို ပိုက်ဆံလဲ ချီးဖူးရမယ်ပေါ့...
ကိုယ့်ဘ၀မှာလဲ မိဘမောင်နှမပြီးရင် အတွယ်တာဆုံးကသူငယ်ချင်းပဲ....။ သူငယ်ချင်းကောင်းပီသရင် အတူတူ တိုက်ပွဲဝင်ရဲကြတယ်ဆိုတာမှန်တယ်...။
နာလဲ သူငယ်တွေ အဲလေ သူငယ်ချင်းတွေကို လွမ်းတယ်..လက်ရှိမှာ ငယ်သူငယ်ချင်းထဲက တစ်ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်..:(
အဖော် ...မိတ်ဆွေ ... သူငယ်ချင်း ... အများကြီးပဲနော် ... ဘ၀က ရှည်ရင် ရှည်သလိုပဲ ...
သူငယ်ချင်း မှန်ရင် ပိုက်ပိုက် ချေးရတယ်နော် မောင်မျိုး လခ ထုတ်ရင် ငါ့ဖုန်းဆက်ဦး သိလား။ :P
အွန်လိုင်းလဲမလာ..ဖုန်းလည်း မဆက်နိုင်လို့မတွေ့ ဖြစ်တာ ၁နှစ်လောက်တောင် ရှိတော့မယ်..ဒါပေမဲ့ ရင်ဘတ်ချင်းနီးနေသေးတယ်..
ဒီဝေါဟာရတောင် မေ့နေတာ အတော်ကြာရောပေါ့။
ရှားပါးဆို စကားပြောရမှာ စိတ်မ၀င်စားတာလဲ ပါတယ်။
တစ်ယောက်ထဲ နေတာများလာတော့ နှစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာတောင် အတော်လေး ကြောက်မိသား။
ဒါဖြင့် သံသရာကို ကြောက်တာလားဆိုတော့
အမှန်က.. မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေကို စကားအဖြစ် ပြောနေရတာကိုက ပျင်းစရာ ကောင်းနေတာ။
ဘ၀မှာ သူငယ်ချင်းကောင်း တကယ် လိုအပ်ပါတယ်။
သူ့ကူညီ ကိုယ့်ညီပေါ့။ သူ့ဖေးမ ကိုယ့်ဖေးမပေါ့။
မောင်မျိုးပြောသလို ထူးထူးဆန်းဆန်း အဖြစ်ဆိုလို့
တီတင့်လည်း အခုဆိုရင် ဘလော့ဂါ ၁၅ ဦးရှိပြီ
ရင်းနှီးနေတယ် အချင်းချင်း နှစ်ပေါင်းများစွာက
ခွဲခွာခဲ့တဲ့သူတွေ ပြန်တွေ့ရသလို အချင်းချင်း
ပြုံးပျော်စွာနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆက်ကြတယ်း)
မောင်မျိုးရဲ့ သူငယ်ချင်းလည်း ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး
ခွန်အားတွေ တိုးသွားသလိုပဲ ကိုမျိုးရေ...:)
သူငယ်ချင်းတွေကို လွမ်းထှာ..နော် ..တစ်ချို့တွေလဲ အမှတ်တရကနေ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်ကုန်ပြီလေ...:(
မမြသွေးနီ.... ဟုတ်တယ်ဗျ သူငယ်ချင်းတွေ တကယ် ရေချမ်းစင်လေးပါ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့ ။
မိုးပျံမ.... ငါ့များပြောထားလိုက်တာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ပြန်ကြည့်နော် မတာမ
ကြီးတော်..သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မကြာမကြာ ဆုံနိုင်ပါစေဗျာ.
ကိုညီ.... ဟုတ်ပါ့ဗျာ သူငယ်ချင်းဆိုပြီး လည်ပင်းကိုဆွဲဖက်ပြီး အားရပါးရခေါ်ချင်လိုက်တာ ။
ကိုညိမ်းနိုင်... ဟုတ်တယ်ဗျ အများကြီးတော့မလိုပါဘူး နားလည်ပေးတဲ့သူဆို အဆင်ပြေပါတယ် ။
ကိုညီရဲ.. အစ်ကိုဖွင့်ဆိုသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အနက်လေးတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပဲဗျ ပိုက်ဆံတော့ ခဏခဏ မချေးနဲ့နော့်း))
မမိုးငွေ့ ...ဟုတ်တယ် သူငယ်ချင်းကောင်းဟာ ရဲဘော်ရဲဘက်ကောင်းနဲ့ တူတယ် ။
မျှစ်..... ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေက မိန်းမရကုန်လို့လားဟ
ကိုအောင်... ဟုတ်တယ် အများကြီး တွေ့ရအုံးမှာပဲ ထင်တယ် ။
မမေ...ဟုတ်တယ် သတင်းတော့ သဲ့သဲ့ကြားတယ် အတိကျတော့မသိဘူးရယ် အဆင်ပြေကြမှာပါလေ ။
ကိုလတ်... ချေးဘူးးး))
ဘလက်စ်...ဟုတ်တယ် ကျနော်လည်း တစ်ခါတလေ အဲ့လို အတွေးတွေဝင်တယ်။
မစန်းထွန်း... ဒါပေါ့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ အနေဝေးပေမယ့် စိတ်ချင်းနီးနေကြမှာပါ ။
ကိုကိုမောင်...သူကြီးက ၂ယောက်ဖြစ်လာမှာကြောက်တယ်ဆိုတာ မိန်းမ မယူချင်သေးလို့များလားး))
အမည်မဲ့...အေးကြည်မ တောင်မေ့တေ့တေ့ဖြစ်နေပြီကောဗျ ။
တီတင့်...ဘလော့ဂါတွေက အပြင်မှာဆုံရင် အမျိုးတွေလိုပဲ တကယ်ပြောတား) သူငယ်ချင်းကတော့ ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး ဘာမှတ်ချက်မှမပေးဘူးဗျ သူက စာဖတ်ပျင်းတယ် ။
အိန်ဂျယ်....အမှတ်တရ ကနေ တကယ်ကို အမှတ်တမဲ့ပါပဲ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေလည်း အမှတ်ရနေကြမှာပါ ။